China Dongshen n'ùkwù etemeete sponge latex-free oblique cut drop-shaped foundation loose powder makeup beauty sponge blender Manufacturer and Supplier | Dongmei
Dongshen N'ogbe etemeete ogbo latex-free oblique bee dobe ekara ntọala rụrụ ntụ ntụ etemeete mma ogbo blender
Dongshen ọkachamara etemeete sponge blender, pink drop-shaped oblique cut, latex-free makeup sponge blender bụ nke ejiri PU mee, enwere ike iji ya maka akọrọ na mmiri, enweghị ntụ ntụ, etemeete na-enwe mmetụta siri ike na enyi nwere akpụkpọ ahụ, enweghị mgbakasị ahụ. .
Spon Mmezu ogbo zuru oke maka etemeete niile: isi nwere ntụpọ maka ngwa dị mfe gburugburu anya, egbugbere ọnụ na imi, ebe akụkụ ala maka ntì, ọkpọiso na akụkụ ndị ọzọ. Ọ mara mma ma dịkwa mfe ibu, ọ dabara adaba maka iji ụlọ, njem.
● Ihe nchacha etemeete etemeete maka ụdị ịchọ mma niile, ntọala, ude BB, ntụ ntụ, ihe mkpuchi, iche, mmiri mmiri, wdg.
● sponge a mere site na ihe PU dị mma, mmetụta dị nro, nke edoziri maka ndị mmadụ niile, nwere omume enyi na akpụkpọ gị.
Application Ngwa zuru oke: sponge blender etemeete na -enye gị ngwa etemeete zuru oke, zere igbu ihe ịchọ mma.
● Wet ma kpọọ nkụ: sponge na -agwakọta na -abawanye ibu mgbe ọ dị mmiri mmiri, tee ya nke ọma iji mepụta etemeete mara mma.
● Reusable & Durable: Ọ dị mfe ihicha ma kpọnwụọ. Anyị na -atụ aro ka ị sachaa ya mgbe ị jichara nke ọ bụla wee dochie sponge onye na -achọ ihe ịchọ mma kwa ọnwa abụọ, echefula ibiaghachi.
Dị nro na Bouncy
Ihe pụrụ iche na -eme Dongshen etemeete ogbo blender bouncy yana nro, dị nso na nkasi obi akpụkpọ ahụ.
Obere nchara dị nro na-enye gị ezigbo ụtọ na ngwakọta, nke na-eme ka ngwa na-enweghị ntụpọ na enweghị ntụpọ nwere obere ngwaahịa.
Ugboro abụọ na nha mgbe mmiri
Mikpuo ogbo ogbo Dongshen nke ọma, pịpụta mmiri oke, ọ ga -eto ihe ruru okpukpu abụọ ka mmiri gachara.
Nke dị mmiri mmiri ga -amịcha obere ihe ịchọ mma kachasị amasị gị, ị ga -ahụkwa ka elasticity na softness nke ọkwa na -esote.
Ọ bụ nnukwu nhọrọ ịhapụ gị ọdịdị mara mma na ọhụụ.
Ojiji na iji mmiri eme ihe ugboro abụọ
Ojiji akọrọ: dabara maka etemeete ntụ ntụ, dị ka ịchafụ, ntụ ntụ, ihe ngosi, wdg.
Ojiji mmiri: zuru oke maka etemeete mmiri mmiri, dị ka ude BB, concealer, ntọala mmiri mmiri, wdg.
Tee etemeete mmiri mmiri na ihu, jiri sponge mmiri mmiri wee dabaa nke ọma maka ngwa na -enweghị ntụpọ. Ọ bụrụ na i mehiere, jiri sponge akọrọ wepụ ihe ịchọ mma ọ bụla karịrị akarị.
Otu esi ehicha sponge etemeete:
Jide n'aka na ị na -ehicha sponge ahụ na mmiri ọkụ mgbe ejiri ya mee ihe ọ bụla iji gbochie mgbasa nke nje.
1.Ekwagọla ngwaahịa mgbe nhicha ngwaahịa. Jiri nwayọ kpoo mmiri ahụ ka ntu ahụ ghara ịchacha ogbo ahụ.
2.Tee obere nchacha na ya, were nwayọ jiri mkpịsị aka gị hapụ ihe fọdụrụ.
3. Sichaa ogbo ahụ n'okpuru mmiri na -agba agba ruo mgbe mmiri chara chara.
4. Chọgharịa mmiri mmiri ọ bụla oke ma kpọnwụọ ya.
Biko gbanwee ogbo gị maka ihe dị ka ụbọchị 30 ka ọ gbasie ike.
Nke gara aga: Dongshen ọkachamara etemeete ogbo dobe udi latex-free Pu ntọala etemeete ịma mma sponge blender
Osote: Dongshen etemeete ahịhịa emeputa N'ogbe okomoko ewu ntutu ọla kọpa ferrule isi awọ osisi etemeete ahịhịa set etemeete ngwaọrụ
etemeete ogbo blender
Nnukwu Ogbo Blender Obere